FAQ - Sinopulse Hose Factory Co., Ltd.
Inona ny fe-potoana handoavanao?
Afaka manaiky amim-pahanginana fe-potoana fandoavam-bola: 1. 30% mialoha, ary 70% fifandanjana manohitra ny dika mitovy ny B/L;L/C;
Inona ny fe-potoana fanaterana anao?
Afaka mamokatra araka ny santionany ve ianao?
Eny, afaka mamokatra ny hose sy ny fitaovana araka ny santionany sy ny sary.